खेलाउने बहानामा आमाको काखबाटै अपहरित आठ महिने शिशुको हत्या ! | जनदिशा
खेलाउने बहानामा आमाको काखबाटै अपहरित आठ महिने शिशुको हत्या !
१२ भदौ । खेलाउने बहानामा आमाको काखबाट अपहरण गरिएकी आठमहिने शिशुको हतया भएको छ ।
औरही नगरपालिका — १ का सन्तोष चौधरीकी आठमहिने छोरी सोनालीको अपहरणपछि हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आईतबार साँझ साढे ६ बजे खेलाउने बहनामा अपरिचित एक युवकले आमा इन्दे्रश चौधरीको काखमा रहेकी सोनालीलाई अपहरण गरेका थिए ।
भगहा नगरपालिकाअन्र्तगत मेघनाथ गोरहन्नाको अंकुश नदी पश्चिममा रहेको फेकु चौधरीको बंगैचामा आँपको रुखमुति सोमबार दिउँसो शिशुको शव भेटिएको थियो ।
हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डिएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
Previous Previous post: ‘निर्मलाका निम्ति न्याय : निरन्तर खबरदारी’ का लागि मण्डलामा कलाकारहरुको सिर्जनशील विरोध (फोटो फिचर)
Next Next post: निर्मला हत्या प्रकरण स् आफन्त जोगाउन मोडियो घट्ना ! ‘राहत होइन, दोषी पत्ता लगाउ’